Forex Kutengesa Blog - Forex Nhau, Zvinyorwa uye Kuongorora Kwemusika - FXCC
Forex Kutengesa Zvinyorwa
Funga Iyo Gap
Ndiwo Iwo Maitiro Achiri Shamwari Yako
Mangwanani Roll Kufona
Nov 27 • 91 Views • Comments Off paDeath Cross trading strategy
Muchinjikwa werufu inzira yehunyanzvi inoratidza kupera kwemusika wenzombe uye kutanga kwemusika webheya. Kana chiyero chenguva pfupi chekufamba (mazuva makumi mashanu) chichipfuura pasi pevhareji yekufamba kwenguva refu, inozivikanwa seDeath Cross (50-day). Iyo X-shape yakagadzirwa ...
Kuboora kenduru pateni yekutengesa zano
Nov 27 • 99 Views • Comments Off paKuboora kenduru pateni yekutengesa zano
Iyo yekuboora maitiro inosanganisira zvigadziko zvemwenje zviviri. Iyo inoratidza kudzoreredzwa kubva kubearish kune bullish pateni uye inoonekwa mune downtrend. Chii chinonzi Kuboora Kenduru Patani? Iyo bhezari yechipiri kenduru inotevera bearish kenduru yekutanga yeKuboora...
Nov 26 • 81 Views • Comments Off paHarami Pattern trading strategy
Iyo harami inzira yakapfava yekenduru yechati inoratidza kuchinjika. Harami izwi rechiJapan rinoreva kuti "ane pamuviri," ndiko kutaridzika kwemaitiro. Chii chinonzi harami pattern? Iyo Harami pateni inoumbwa nezvigadziko zviviri zvemwenje. Yekutanga...
ABCD Pattern yekutengesa nzira
Nov 25 • 106 Views • Comments Off paABCD Pateni yekutengesa nzira
Iyo ABCD iHarmonic pateni inoratidza mukana wekudzokera kumashure. HM Gartley akawana patani ndokuiburitsa mubhuku rake "Profits in the Stock Market." Scott Carney akashanda paABCD pateni mushure. Chii chinonzi ABCD pateni?...
Maitiro ekuona maitiro ekuchinja?
Jun 25 • 2213 Maonero • Maitiro ekutengesa ndeimwe yemhando yakapusa uye yakakurudzirwa yekutengesa kwevanotanga mumusika wepamberi. Asi pane ...
Unogona here kurarama nekutengesa FX? Kana chokwadi chiruma nekushungurudza…
Kune zvikonzero zvakawanda zvatinopinda mukutengesa zvekutengesa uye kune mamwe magadzirirwo, ayo anomhanya kuburikidza ...
Kukadzi 27 • 12130 Views
Chigadziko chemwenje chinozorodza Kosi, kutsvaga mutengo chiito
Kukadzi 27 • 10075 Views
Iyo psychology inobatanidzwa mune Forex Trading
Kukadzi 23 • 10287 Views
Hupenyu hweMutengesi Forex
Kubvumbi 30 • 11747 Views
Chii chakatikwezva kuFX kutengesa, nei tichizviita, zviri 'kushanda ...
Kubvumbi 29 • 10598 Views
Demo riri kutengesa nzira chaiyo pamberi pe'kutengesa chaiko 'uye kana zvirizvo panguva ipi ...
Kubvumbi 25 • 10237 Views
Isu tinofanirwa kuyedza kuchengetedza uye kudzikisira kukanganisa kwekutengeserana kwakaenda zvakashata, ...
Kubvumbi 24 • 11905 Views
Ini ndinodzidza sei kukwidziridza purofiti yangu uye kudzikisa kurasikirwa kwangu?
Kubvumbi 23 • 10388 Views
Ndiri kuenda kuedza FX kutengesa zvakare chii chandinofanira kuita zvakasiyana nguva ino?
Kubvumbi 22 • 9606 Views
Kupi uye riini vatengesi vatsva vanofanira kutanga kuwedzera tekinoroji kuongorora kune kwedu kutengesa
Kubvumbi 18 • 11619 Views
Ndiyo nguva yekurasikirwa yandiri kusangana nayo pasi pesarudzo yangu, kana kungoita rombo rakaipa ...
Kubvumbi 17 • 10403 Views
Mabasa edu asingakanganwike
Kubvumbi 16 • 10118 Views
Ndekupi kwandinofanira kuisa yangu yekumira kurasikirwa?
Kutengesa Kwemari (10)
Akaunti ye Forex (83)
Forex bhuroka (56)
Forex Zviratidzo (43)
Forex Anokosha Metals (45)
Forex anonongedzera (37)
Forex Software uye System (46)
Forex Kutengesa Zvinyorwa (1,087)
Forex Kutengesa Kudzidziswa (40)
chinokosha Analysis (1)
Hot Kutengesa Nhau (17)
Ndiwo Iwo Maitiro Achiri Shamwari Yako (67)
Mashoko eMusika (571)
Market Market (82)
Funga Iyo Gap (225)
Mangwanani Roll Kufona (677)
Zvakaitika Kare (1)
Kutsanangura Kuramba uye Rutsigiro naThomas DeMark's Pivot Points Calculator
Maitiro aHeikin Ashi, Iwo Akaunganidzwa Mwenje, Anogona Kukubatsira Iwe Kudzivisa Ruzha mune Forex Masoko
Mutengo chiito pane 'asina kupfeka' machati uchishandisa Heikin Ashi makenduru, kuti nyore sei kuridza kuomarara
39% Yevatengesi ve Forex Vanobatsira
Mitemo mikuru yaNassim Taleb yekutengesa zvigunwe
Triple Screen yekutengesa zano
Disclaimer: Izvo zvirimo zveichi chinhu ndechekushambadzira kutaurirana, uye kwete yakazvimiririra yekudyara kuraira kana kutsvagisa.
Izvo zvinhu ndezve ruzivo rwehuwandu ruzivo chete (kungave kana kwete inotaura chero maonero). Hapana chinhu mune ino chinyorwa chiri (kana chinofanirwa kutariswa kuve) chepamutemo, chemari, chekudyara kana rimwe zano rinofanira kuiswa kuvimba. Hapana maonero akapihwa muzvinyorwa izvi anoratidza kurudziro neFX Central Clearing Ltd kana munyori kuti chero hupi hupi hupi hupfumi, kuchengetedzeka, kutengeserana kana hurongwa hwekudyara hwakakodzera chero munhu chaiye.
Kunyangwe ruzivo rwakatarwa mukutaurirana kwekushambadzira kunowanikwa kubva kunzvimbo dzinofungidzirwa kuvimbika, FX Central Clearing Ltd haina vimbiso yekukosha kwayo kana kukwana. Ruzivo rwese rwunoratidza uye runogona kuchinja pasina ziviso uye runogona kunge rwuri rwechinyakare chero nguva yakapihwa. Hapana FX Central Clearing Ltd kana iye munyori wezvinhu izvi anozokonzeresa chero kurasikirwa kwaungaite, kungave zvakananga kana zvisina kunangana, zvichibva kune chero hupfumi hunotungamirwa pane chero ruzivo rwuri pano. Tsvaga yakazvimirira kuraira kana zvichidikanwa
© 2021 Forex Trading Blog - Forex Nhau, Zvinyorwa uye Kuongorora Kwemusika - FXCC | A broker parutivi rwako
dzinofambiswa ne Wordpress. Yakagadzirwa na Vergo ™